Iindlela ezi-5 eziphezulu zokufumana ababukeli ukuba baphawule kwiividiyo zakho zikaYouTube-YTpals
Abaqulunqi bomxholo weYouTube basebenza kwisicwangciso sabo se-SEO ukuze badibanise abo bakhuphisana nabo kunye nokuphucula umgangatho wabo weYouTube. Ngelixa ulinganisa iividiyo, i-algorithm yeYouTube ikwathathela ingqalelo ukubandakanyeka kwababukeli. Kukho izalathisi ezibalulekileyo ozidingayo ukuze uchonge ubume bokubandakanyeka kombukeli. Ezi zezi - iimbono zasimahla zikaYouTube, izinto ezithandwa nguYouTube simahla, izabelo zasimahla zikaYouTube, ixesha lokubukela likaYouTube mahala, kunye nezimvo zasimahla zikaYouTube.
Amajelo amatsha ngamanye amaxesha akufumanisa kunzima ukucofa ngoko nangoko kuYouTube. Oko akuthethi ukuba kufuneka unikezele kuba zininzi iindlela zokwenza abaphulaphuli bakho bazibandakanye nawe.
Umdlalo wecandelo lamagqabantshintshi
Ngaphandle kokubonelela ngempendulo ebalulekileyo yababukeli, amagqabantshintshi kwiividiyo zakho adlala indima ebalulekileyo ekwandiseni unxibelelwano lwevidiyo kunye nokwandisa ukufikelela kwakho ngokuthengisa izimvo. Ayimangalisi into yokuba abadali bakaYouTube rhoqo Thenga izimvo zikaYouTube! Makhe sijonge amacebo ambalwa okufumana izimvo ezingakumbi kwiividiyo zakho zikaYouTube.
Ukuphendula kwizimvo kunye nokuthatha inxaxheba kwiingxoxo
Zibandakanye nababukeli bakho ngokuphawula kwiividiyo zakho kunye nokukhokela ingxoxo. Qinisekisa ukuba uphendula ngokukhawuleza kwizimvo kwiividiyo zakho. Ukusebenzisana nababukeli bakho kunokumema ukubandakanyeka, ukonyusa ukuthembeka kwejelo lakho, kunye negalelo ekuqhubeni itrafikhi engakumbi. Ngamagqabantshintshi amakhulu, ukuphendula kuyo nganye kunokudinwa kwaye kube nzima ekuhambeni kwexesha. Unokucinga ngokusebenzisa izixhobo ezineempendulo ezihlakaniphileyo kunye neenketho zokuphendula ezinkonkxiweyo.
Ukumema ingxelo kunye neengcebiso
Phelisa iividiyo zakho ngemibuzo kwaye umeme ababukeli bagqabaza. Unokucela ingxelo kubabukeli bakho kwaye uzame ukuphumeza nayiphi na ingxelo eyakhayo. Beka iliso kwiingcebiso zababukeli kwaye usebenzise iingcebiso ezininzi kangangoko. Khetha ezona zicelo zidumileyo kwaye wenze iividiyo ezizayo ukuze ujongane nezinto ozikhethayo ababukeli.
Ukuqhuba iiseshoni ze-Q&A kunye nokupha
Yazisa iiseshoni zemibuzo neempendulo (i-Q&A) kwaye ukhuthaze ababukeli ukuba babuze nayiphi na imibuzo okanye imibuzo abanokuba nayo. Kuya kufuneka ube neevidiyo ezizinikeleyo zokuthatha kwaye uphendule le mibuzo. Iiseshini zokusasaza bukhoma ukuphendula imibuzo yombukeli yeyona ndlela ilungileyo, eyenza ababukeli bazibandakanye nawe ngexesha lokwenyani. Cinga ngokubhengeza iziphiwo ezikhuthaza ababukeli ukuba baphawule ngeevidiyo zakho. Yenza iminikelo yeveki okanye yenyanga kubabukeli abambalwa abakhethwe ngokungacwangciswanga abaphawula ngeevidiyo zakho. Iividiyo ezinjalo zikwabelwana kakhulu. Kodwa, ukukhuthaza abaphulaphuli bakho ukuba babelane, unako thenga izabelo zikaYouTube. Ukuba nenkohliso yezabelo ezininzi kuhlala kunyanzela abantu ukuba babelane ngomxholo.
I-Trolling yinkathazo eqhelekileyo yentlalo yoluntu, kwaye iYouTube ayikhululwa kuyo. Esona sicwangciso silungileyo kukuphepha ukungakhathali kwaye ngoyaba zonke iitroli. Kuyacetyiswa ukuba ungabandakanyeki kwiingxoxo ezingento yanto kunye neetroli. Ukuphendula kwizimvo ezinentiyo kusenokubangela igama elibi kwijelo. Iitroli zinokubonakala zincinci kwaye zingenabungozi, kodwa izimvo zabo ezingakhiyo zinamandla okugxotha ababukeli bokwenyani abanqwenela ukuzibandakanya nejelo lakho. Ukunqanda ukucaphuka rhoqo kunye nayo nayiphi na impembelelo embi ekukhuleni kwetshaneli yakho, unokukhetha ukuvala okanye ukufihla izimvo zeetroli.
Ukunxulumana namanye amajelo eYouTube
Hlala unolwazi ngabadali bomxholo abadumileyo nabazayo kwi-niche yakho kwaye unxibelelane nabo. Landela ijelo labo kwaye ulahle amagqabantshintshi abukhali okanye anentsingiselo kwiividiyo zabo ukuze bavule iingxoxo. Ukuzibandakanya rhoqo kuya kwenza ukuba ijelo lakho liqatshelwe, kwaye oku kuya kukhuthaza abanye abadali ukuba babuyisele kwaye balahle izimvo ezihlakaniphile kwiividiyo zakho. Unokucebisa amanye amajelo eYouTube ngeevidiyo zakho. Abanye bababukeli bakho abathembekileyo banokujonga amajelo akho acetyiswayo okanye iividiyo. Bakhuthaze ukuba bahlomle kwezo vidiyo zikaYouTube zikhankanya igama letshaneli lakho. Abanye abadali nabo baya kukubuyisela inkoliseko yakho kwaye baqhube itrafikhi kwitshaneli yakho, bandise ukufikelela kwijelo lakho. Unokwenza iividiyo zentsebenziswano kunye nabanye abaqulunqi bomxholo kwaye ufumane umtsalane ngokujongwa okudibeneyo.
Ukuhenda ababukeli ukuba baphawule kwiividiyo zakho zikaYouTube kufuna indlela yobuchule. Amacebo ambalwa asisiseko aya kukunceda wenze iforum esebenzisanayo yesiseko sakho sababukeli, esiya kuthi, sikhawulezise ukukhula kwesitishi sakho.
Ukuba ufuna uncedo lobuchwephesha ukuze thenga ukuthanda kweYouTube kunye nezimvo, iiYTpals zinokunika isikhokelo esifanelekileyo. Sinobuchule bokukufundisa kwaye sincede ukukhulisa ukuzibandakanya kwakho kuYouTube. Sinokukunceda nawe thenga iiyure zokubukela zikaYouTube.
Okokugqibela, ukuba unqwenela ukwenza ngokwendalo ababhalisile beYouTube basimahla, kutheni kungenjalo bathenge ababhalisile kwiYouTube evela kuthi? Ukujonga uninzi lwababhalisile kwijelo lakho, uyakuqala ukutsala ababhalisile bezinto eziphilayo abaya kukhula bathande iakhawunti yakho. Nge-YTPals, unokufumana izimvo zasimahla zeYouTube.
Iindlela ezi-5 eziphezulu zokufumana ababukeli ukuba baphawule kwiividiyo zakho zikaYouTube ngababhali beYTpals, 25 May 2022
Iimpawu ezi-6 zikaYouTube ekumele uMntu wonke aziMdalo
I-YouTube inezinto ezininzi ezinokusetyenziswa ngabenzi bevidiyo ukubanceda kwimisebenzi yabo kunye neeprojekthi zevidiyo. Ezinye zezi zinto ziyilelwe ukukunceda utsala iimbono ezininzi ngelixa ikuvumela ukuba…
Iindlela ezi-8 onokwandisa ababhalisi bakho kwiYouTube-Isikhokelo sethu
Ukuphumelela kwi-YouTube kubandakanya ngaphezulu kokulayisha nje iividiyo kunye nokucela abantu ukuba babhalise kwisitishi sakho. Ukuba ufuna ukufumana impumelelo eqongeni, kuya kufuneka wakhe kuqala abaphulaphuli bakho. Oko kubizwa ngokuba…
Eyona misebenzi ye-YouTube ye-YouTube ye-2021
I-YouTube yeyona injini yokukhangela yesibini ngobukhulu emhlabeni emva koGoogle. Ukuphakama kwayo ekudumeni akuzange kube yinto emfutshane. Njengokuba usebenzisa amacebo e-SEO ukubonisa iziphumo eziphezulu zikaGoogle,…